TOTALENERGIES - stop being an accessory to Min Aung Hlaing & the Myanmar military’s murder campaign! (မြန်မာဘာသာပြန်ကို အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။) - Action Network
225,983 Signatures Collected
Only 183,617 more until our goal of 409,600
If you are not already subscribed, would you like to receive email updates from Blood Money Campaign, No Business With Genocide, Global Myanmar Spring Revolution - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေး, CRPH/NUG Support Group (Australia), International Campaign for the Rohingya, Global Movement for Myanmar Democracy, and Campaign foraNew Myanmar? * Yes, opt in to email updates No, do not opt in
TOTALENERGIES - stop being an accessory to Min Aung Hlaing & the Myanmar military’s murder campaign! (မြန်မာဘာသာပြန်ကို အောက်တွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
Mr. Patrick Pouyanne, Chairman and CEO of TotalEnergies
So, #WhatsHappeningInMyanmar ?
The Myanmar military coup d’état has failed
On 1 February 2021, Myanmar’s military attemptedacoup d’état and declaredastate of emergency. In doing so it violated Myanmar’s 2008 Constitution, international law and basic rule of law principles. Faced with persistent nationwide resistance, military leaders have failed to achieve control of the country.
Human rights violations and terrorisation of innocent civilians
The Myanmar military unlawfully arrested elected officials and brutally responded to the non-violent Civil Disobedience Movement (CDM) and peaceful demonstrators using lethal force. Civilians have been terrorised with arbitrary shootings, arrests, beatings and enforced disappearances. There are many reports of torture and sexual assault while in custody. Journalists are targeted.
The Myanmar military has killed over 1000 civilians since the failed coup
Since 1 February, over 1150 citizens have been killed. Over 8800 citizens, including children, have been unlawfully detained and over 7000 remain in detention. 26 people have been sentenced to death, including2children.
How is the Myanmar military funded? By oil and gas revenue
The Myanmar military gets most of its revenue from conglomerates which it owns or are state-owned. Most revenue comes from joint venture gas projects, mainly with foreign multinationals, worth an estimated USD1.1 billionayear.
TotalEnergies is likely to be the military regime’s single largest source of revenue
France’s TotalEnergies is engaged in joint energy ventures with MOGE along with US company Chevron, South Korea’s Posco and Malaysia’s Petronas. MOGE, TotalEnergies, Chevron and Thailand’s PTTEP are joint partners in the huge Yadana offshore gas project of which TotalEnergies owns 31.24% share.
In 2017-2018, payments MOGE collected relating to TotalEnergiesamounted to almost USD400 million.
MOGE isastate-owned enterprise under military control
TotalEnergies’ business partner MOGE isastate-owned enterprise. The military junta now has control over all government bank accounts, and all funds held in these accounts can be accessed by the military.
The Myanmar Ministry of Planning, Finance and Industry is forecasted MOGE to earn USD1.5 billion in 2021-2022 from offshore and pipeline projects.
Funding the military means the likelihood of continued human rights violations
The Myanmar military hasalong documented history of committing serious human rights violations, crimes against humanity and war crimes. Recent attacks on civilians reflect patterns of violence and oppression documented against ethnic groups over the past 70 years. This includes genocide, forced displacement, torture and inhuman treatment, forced labour, sex and gender-based violence and rape asaweapon of war.
TotalEnergies is still paying 90% of financial payments to the Myanmar military
TotalEnergies’s suspension of dividend payments to the military-controlled Moattama Gas Transportation Company (MGTC) in May 2021 wasastep in the right direction. However, the suspension only accounted for approximately 10% of the total financial payments from the Yadana project. This means that Total continues to pay the remaining 90%, financial or in-kind, to the Myanmar military.
This includes production bonuses, royalties and taxes. Thus, TotalEnergies continues to provide large sources of revenue to fund the operations of the Myanmar military.
We call for TotalEnergies to immediately suspend all payments to the military junta and place funds inaprotected account until democracy is restored in Myanmar.
Publish What You Pay: Financing the Military in Myanmar: Analysis of Gas Revenues: https://www.pwyp.org/pwyp-resources/financing-the-military-in-myanmar-analysis-of-gas-revenues/
Publish What You Pay: The military or the people. Who benefits from Myanmar’s offshore gas? https://www.pwyp.org.au/publications/who-benefits-from-myanmar-gas
Justice For Myanmar: Is Total profiteering in Myanmar?: https://www.justiceformyanmar.org/stories/total-profiteering
Statement of 462 Civil Society Organisations: https://progressivevoicemyanmar.org/2021/08/02/cso-statement-while-people-of-myanmar-demand-sanctions-on-junta-run-gas-enterprise-chevron-and-total-bankroll-abuses/
La position de Total en Birmanie revient à nier la volonté démocratique du peuple: https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/04/21/la-position-de-total-en-birmanie-revient-a-nier-la-volonte-democratique-du-peuple_6077497_3232.html
Total Petition (In Myanmar)
မြန်မာစစ်တပ်၏ အာဏာသိမ်းမှု ကျဆုံးနေပါတယ်။
၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် နေ့တွင် စစ်တပ်သည် နိုင်ငံကိုအရေးပေါ် အခြေအနေ ကြေညာပြီး မတရားသဖြင့် အာဏာသိမ်းယူခဲ့ပါတယ်။ ထိုလုပ်ရပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဉပဒေ၊ နိုင်ငံတကာ ဉပဒေနှင့် အခြေခံ တရားဉပဒေ စိုးမိုးမှုများကို ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် တော်လှန်နေသောကြောင့် စစ်တပ် ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကျရှုံး နေပါတယ်။
လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခြင်းများနဲ့ အပြစ်မဲ့ အရပ်သားများအား အကြမ်းဖက်ခြင်း။
မြန်မာစစ်တပ်က တရားဝင်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားသော အစိုးရ အရာရှိများကို မတရား ဖမ်းဆီးခဲ့ပြိး ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြသော CDM (Civil Disobedience Movement) လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများကို ရက်စက်စွာ သေစေနိုင်သော အင်အားအသုံးပြု၍ အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းမှုမှား ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အရပ်သား ပြည်သူများအနေဖြင့် ကျဉ်အစစ်ဖြင့် ပစ်ခတ်ခံရခြင်း ၊ ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၊ အသက်သေဆုံးသည်အထိ နှိပ်စက်ခံရခြင်း များစတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေကို ခံစားကြရပါတယ်။ ချုပ်နှောင်ထားချိန်မှာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း နှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခံရခြင်းသတင်း များစွာရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် စစ်တပ်က သတင်းသမားများကိုပါ ပစ်မှတ်ထား ဖမ်းဆီးမှုတွေ ပြုလုပ်ပ ပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်က အပြစ်မဲ့ပြည်သူ ၁၀၀၀ ကျော်ကို အာဏာသိမ်းမှု စကတည်းက လူမဆန်စွာ သတ်ခဲ့ပါတယ်
ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ကတည်းက ပြည်သူ ၁၁၅၀ ကျော် ကို သတ်ခဲ့တယ်။ (နေ့တိုင်း လူတွေသေနေတာပါ)
ပြည်သူ ၈၈၀၀ကျော် (ကလေးများ အပါအဝင်)ကို ဥပဒေမဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်သိမ်းခဲ့ပြီး ၇၀၀၀ ကျော်ကို ထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေး နှစ်ယောက် အပါအဝင် ပြည်သူ ၂၆ ဦးကို သေဒဏ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်သည် ရေနံနှင်သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့မှ အခွန်ဖြင့် မည်သို့ ဝင်ငွှေရှာလဲ??
အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ စစ်တပ်ပိုင် လုပ်ငန်းများကနေ ဘဏ္ဍာငွေအများစုကိုရယူ ပါတယ်။ ငွေအများစုကတော့ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ လုပ်ငန်များမှ ဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ခန့်မှန်းငွေ ကန်ဒေါ်လာ ၁.၁ ဘီလီယံနီးပါး ရရှိနေပါတယ်။
"Total" ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုမ္ပဏီကတော့ စစ်အုပ်စု၏ အကြီးမားဆုံး ဝင်ငွေ လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်သစ် နိုင်ငံမှ ''TotalEnergies" ကုမ္ပဏီသည် အမေရိကန်မှ "Chevron", တောင်ကိုရီးယားမှ "POSCO" အပြင် မလေးရှားမှ "Petronas" တို့နှင့်အတူ MOGE နှင့်စွမ်းအင်လုပ်ငန်းများတွင် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေပါသည်။
MOGE, TotalEnergies, Chevron, Thailand’s PTTEP တို့ဟာ အလွန်ကြီးမားတဲ့ ကမ်းလွန် သဘာ၀ဓါတ်ငွေ့ ရတနာစီမံကိန်းတွင် ပူးတွဲ မိတ်ဖက်များ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစီမံကိန်းတွင် 'TotalEnergies" မှ ၃၁.၂၄% ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။
၂၀၁၇~၁၈ ခုနှစ်တွင် "TotalEnergie" ကုမ္ပဏီမှ ရသော ငွေသည် ကန်ဒေါ်လာ သန်း ၄၀၀ နီးပါးရှိပါတယ်။
မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE) သည် မြန်မာစစ်တပ် လက်အောက်တွင် ထိန်းချုပ်ထားသော နိုင်ငံပိုင် လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း (MOGE) သည် Total ကုမ္ပဏီ၏ စီးပွားဖက်ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်တပ်က အစိုးရ ဘဏ်အကောင့်များ အားလုံးကိုထိနိးချုပ်ထားပြီး ၄င်းအကောင့်များထဲရှိ ငွေများကိုလည်း လိုသလို အသုံးပြုနိုင်သော အနေအထားတွင် ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ်တွင် MOGE အနေဖြင့် ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်နှင့် ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းများမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၅ ဘီလီယံ ရရှိနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
အကြမ်းဖက် စစ်တပ်အား ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးနေခြင်းသည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်စေရန် လမ်းခင်းပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်။
မြန်မာစစ်တပ်က ပြင်းထန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ၊ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်သော ရာဇဝတ်မှုများ၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ သမိုင်းဆိုးရှိသူများဖြစ်တယ်။ အခုကာလအတွင်း လောလောလတ်လတ်ဖြစ်ပွားနေသော မြန်မာစစ်တပ်၏ အရပ်သားများအပေါ် တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်မှုများသည် လွန်ခဲ့သောနှစ် ၇၀ ကာလအတွင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများအပေါ် မြန်မာစစ်တပ်မှ ကျူးလွန်ခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဖိနှိပ်မှု ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံကို ထင်ဟပ်လျက်ရှိပါတယ်။ ထိုဖိနှိပ်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးစုံတွင် လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု၊ အတင်းအကျပ် နေရာရွှေ့ပြောင်းမှု၊ လူမဆန်ရက်စက်စွာ နှိပ်စက်ခြင်း၊ အဓမ္မလုပ်အားခိုင်းစေမှု၊ လိင်နှင့်ကျားမအခြေပြု၍အကြမ်းဖက်ခြင်း၊ မုဒိန်းမှုကို စစ်လက်နက်သဖွယ် အသုံးချခြင်းစသည်ပုံသဏ္ဍများဖြင့်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။
Total က လက်ရှိမှာ အမြတ်ငွေ၏ ၉၀%ကို မြန်မာစစ်တပ်အား ဆက်လက်ပေးဆောင်လျက်ရှိပါတယ်။
Total မှ မြန်မာစစ်တပ်လက်အောက်ခံ မုတ္တမ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ (MGTC) သို့ အမြတ်ငွေအချို့ ပေးဆောင်ရန် ရပ်ဆိုင်းခဲ့ခြင်းက မှန်ကန်သော ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမဲ့ ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော ငွေပမာဏက Total ၏ ရတနာ သဘာဝဓါတ်ငွေ့စီမံကိန်းမှ မြန်မာစစ်တပ်သို့ ပေးဆောင်ရမည့်ပမာဏ၏ ၁၀% သာရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ Total အနေဖြင့် ၉၀%သော အမြတ်ငွေများကို မြန်မာစစ်တပ်ထံသို့ ဆက်လက်ပေးဆောင်လျက်ရှိနေတာပါ။
ထိုငွေများတွင် ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ပေးဆောင်ရသည့်ငွေများ၊ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်အတွက် ပေးဆောင်ရသည့်ငွေများနှင့်
အခွန်ငွေများပါဝင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် Total ကုမ္ပဏီသည် မြန်မာစစ်တပ်၏ အကြမ်းဖက်သတ်ဖြတ်မှုများအတွက် ငွေကြေး ဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည့် အဓိကငွေအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တရားမဝင် အာဏာသိမ်း စစ်အုပ်စုကို TotalEnergies မှ ပေးချေနေသော ငွေများ အားလုံး ချက်ချင်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြန်လည်ရရှိသည့် အချိန်ထိ လုံခြုံစိတ်ချသော စစ်တပ်ယူသုံးလို့မရသော အကောင့်တွေ ထိန်းသိမ်းထား ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ တောင်းဆိုသည်။
TotalEnergies Petition French
Demandez à TOTAL de cesser d'être complice de la campagne d'assassinat organisée par Min Aung Hlaing et son armée.
Alors, #WhatsHappeningInMyanmar ?
Echec du coup d'État par l'armée birmane
Le 1er février 2021, les militaires birmans ont un coup d'État et déclaré l'état d'urgence, en violation de la Constitution de 2008 de la Birmanie, du droit international et des principes fondamentaux de l'État de droit.
Violations des droits de l'homme et terrorisation de civils innocents
Des élus ont été arrêtés illégalement et les militaires birmans ont violemment répliqué au Mouvement de Désobéissance Civile (CDM), en déployant une force meurtrière contre des manifestants pacifiques. Des civils ont été terrorisés par des arrestations arbitraires, la persécution de journalistes et des disparitions forcées, et des cas de torture et d'agression sexuelle en détention ont été signalés.
Les militaires birmans ont assassiné plus de 1000 civils depuis le coup d'État
Depuis le 1er février, plus de 1000 citoyens ont été assassinés, et plus de 7000 civils, dont des enfants, ont été détenus illégalement. 26 personnes ont été condamnées à mort, dont2enfants.
Comment l'armée birmane est-elle financée ? Par les revenus du pétrole et du gaz
L'armée birmane est en grande partie financée par les revenus du gaz grâce à des joint ventures qui leur rapporte environ 1,1 milliard de dollars par an.
Total est probablement la principale source de revenus du régime militaire.
L’entreprise française Total est l'une des nombreuses multinationales pétrolières et gazières qui participent à des joint ventures avec l’entreprise ‘Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE)’, ainsi que l’entreprise américaine Chevron, l’entreprise sud-coréenne Posco et l’entreprise malaisienne Petronas.
Total, Chevron, MOGE et l’entreprise thaïlandaise PTTEP sont partenaires dans l'énorme projet gazier offshore Yadana, dont Total détient 31,24 %.
Le partenaire de Total, MOGE, est une entreprise d'État, sous contrôle militaire.
MOGE est une agence du ministère de l'Électricité et de l'Énergie du Myanmar (MOEE). L'actuel ministre du MOEEaété nommé par le Conseil d'administration de l'État (SAC) de l'armée birmane, dirigé par l'instigateur du Coup, le général Min Aung Hlaing.
Le général Min Aung Hlaingaété identifié par la Mission internationale indépendante d'établissement des faits au Myanmar (IIFFMM) aux fins d’enquêtes et de poursuites pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide en vertu du droit international.
L'armée birmaneapris le contrôle de tous les comptes bancaires du gouvernement.
À la suite du coup d'État, les militaires ont le contrôle de tous les comptes bancaires du gouvernement, et tous les fonds détenus sur ces comptes sont accessibles aux militaires.
En 2017-2018, le MOGEaperçu des paiements de la part de Total pour un montant de près de 400 millions USD.
Le ministère de la Planification, des Finances et de l'Industrie du Myanmaraprévu que le MOGE gagnerait 1,5 milliard USD en 2021-2022 grâce aux projets offshore et de pipelines.
Le financement de l'armée signifie très probablement la poursuite des violations des droits de l'homme
L'armée birmaneaun long passé de violations graves des droits humains et de crimes contre l'humanité. Les récentes attaques délibérées contre des civils reflètent les schémas de violence et les mesures d'oppression documentées contre les groupes ethniques au cours des 70 dernières années. Il s'agit notamment de génocide, de déplacements forcés, de torture, de traitements inhumains et de travail forcé, de violences sexuelles et sexistes et de viols utilisés comme arme de guerre.
Total verse toujours 90% de ses revenus à l'armée birmane
Bien qu'il ait déclaré la suspension des paiements de dividendes à la Moattama Gas Transportation Company (MGTC), la source de financement de la junte militaire birmane au travers du projet Yadana, Total continue à effectuer des paiements financiers ou en nature au gouvernement du Myanmar.
Cela comprend des primes de production, des redevances, des taxes. Ils fournissent toujours d'importantes sources de revenus pour financer les opérations de l'armée birmane.
Nous demandons à Total de suspendre immédiatement tout paiement à la junte militaire et de placer les fonds sur un compte protégé jusqu'au rétablissement de la démocratie en Birmanie.
Publish What You Pay: Financing the Military in Myanmar: Analysis of Gas Revenues https://www.pwyp.org/pwyp-resources/financing-the-military-in-myanmar-analysis-of-gas-revenues/
Justice For Myanmar: Is Total profiteering in Myanmar?https://www.justiceformyanmar.org/stories/total-profiteering
La position de Total en Birmanie revient à nier la volonté démocratique du peuple
To: Mr. Patrick Pouyanne, Chairman and CEO of TotalEnergies
I demand that TotalEnergies immediately suspend all payments to the Myanmar military junta and place funds in an escrow account untilademocratically elected government is in place in Myanmar.
The Myanmar military February 2021 coup d’état has failed. Faced with persistent nationwide resistance, military leaders have failed to achieve control of the country.
The Myanmar military unlawfully arrested elected officials and brutally responded to the non-violent Civil Disobedience Movement (CDM) and peaceful demonstrators using lethal force. Civilians have been terrorized with arbitrary shootings, arrests, beatings, and enforced disappearances. There are many reports of torture and sexual assault while in custody.
Since 1 February, over 1150 citizens have been killed, including over 69 children. Over 8800 citizens have been unlawfully detained, and over 7000 remain in detention. 26 people have been sentenced to death, including2children.
TotalEnergies is likely to be the military regime’s single biggest source of revenue, and its partner MOGE isastate-owned enterprise. The military junta now has control over all government bank accounts, and all funds held in these accounts can be accessed by the military.
Despite suspending dividend payments to the military via the Moattama Gas Transportation Company (MGTC), TotalEnergies continues to make 90% of payments (financial or in-kind) to the Myanmar military government.
The Myanmar military hasadocumented history of serious human rights violations and crimes against humanity. This includes genocide, forced displacement, torture and inhuman treatment and forced labor, sexual and gender-based violence, and rape asaweapon of war.
Funding the military means the likelihood of continued human rights violations.
In order to prevent the funding of and complicity in further crimes against humanity, I call for TotalEnergies to immediately suspend all payments to the military junta and place funds in an escrow account untilademocratically elected government is in place in Myanmar.